Pesita sy zesita - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsy diso ilay comptable… Tsiahy naherin’ny 70 anie ny matin’ny pesita tamin’ny taona 2014 e.
Izany no nahatonga an’i Ari Ira nanoratra ity tononkalo ity izay aroso aminao ny ampahany
Fako eran' ny arabe sy ny lakan-drano taza-maso;
ny mponina efa miha-voretra ny savony koa miha-lafo,
ny tonta toa tsy taka-bidy nefa ny voalavo miaka-dapa;
ny hanin-kohanina aza tsy hita koa iza indray no hiompy saka?
Dia nihombo ilay aretina; fito amby efa-polo maty,
ilay aretina noheverina hoe efa tena lany daty,
ilay aretin'ny mahantra hoy ny mpanabantibanty,
ilay aretina maha-menatra nefa izao mirantiranty. (…)
Daty : 26/11/2014
Sombin’ny diam-penin’i Ari Ira
Ny tononkalo manontolo dia azonao vakiana ao amin’ity rohy ity
Isika izao amin’ity taona 2017 vao maherin’ny 20… Ka tsy diso ny teknisianina milaza fa vao io monja… Mandeha be ity resaka pesita ity. Mangina be ny mpitondra. Ao ireo milaza fa mangina sy tsy mihetsika ny mpitondra mba ho betsaka ny ho voa ka hisokatra malaky ny robinet an’ireo mpamatsy vola dia ho avy masiaka ireo mpitondra ireo rehefa misokatra tokoa io robinet ho zary ho voakilasy hoe izy ireo no mesia sy mpamonjy. Izay ry mpitondra ny fijerin’ny vahoaka anareo. Izay ilay fika hoy Raozy
Zay ilay fika
Zay ilay fika ho an’izay tsy kopy
Hoe resaky ny olona te hiseho ho top
Mody hoe ndeha iandrandrao ny lanitra
Dia iny ianao fa tsy hahatazana ny lalitra
Zay ilay fika sao tsy maha kobo
Hoe zarao ny bononoka, zarao ny habobo
Mody hoe omeo ny tolaka afo-manga
Dia tsy hahita intsony ireto lali-manga
Zay ilay fika sao mba mety tafa
Hoe omeo ny feinte kely mba hafahafa
Mody omena ny toraka eny an’habakabaka
Dia amin’izay hoe mangina tsy mibabaka
Zay ilay fika sao mba hoe poince
Hoe ovaina kely indray ny filince
Mody avadika style koa ny zesita (geste)
Dia tsy hita ny voalavo izay mitari-pesita
Koa ialahy tsy kopy fa venance
Raha voany ialahy , dia bonne chance
Ialahy voavidy dia handatsa-bato
F’izahay raha mahazo dia hitora-bato
F’izay ny morse miainga sy efa masaka
Aleo aloha ny fako hihaavo-sasaka
Dia ny propagandin’ny depiote
No hamafa sy hanadio ny arabe
Raha tsy kopy ialahy dia akory atao
Fa ny azy, izay no efa kilalao
Tsy azonao ngah ilay repoblika
Ketrika tsotra hoe : “RIP-public”
Ny peste ihany ny azy no petard
Ry zareo ihany hono no tia an’I Gasikara
Feu d’artifice mahavita manadio
Ry zareo ihany koa hono no fidio
Ilay fikanao ry mpitondra zary fakana tahaka ka tahaka izao no fiantraikany anaty fiaraha-monina
Dia noheverina ho mararin'ity pesta mahafaty.
Tonga tao amin'ny banky, filaharana aok'izany
Hatrany anatin'ny birao ka hatrany an-tokotany
Teny Mahamasina aho, te-hitsindroka fripy
Mody nitehan-tratra aho, sy nikohaka im-polo
Sa kosa ilay tazan’ny mpitondra anaty fiaraha-monina no nataony ho modely hitantanana ny firenena ? Asa lahy fa na ho inona fanazavana dia tsapa fa Mifindra ny aretina Pesita ary mora mifindra ny ratsy ka samia mailo aza manaiky hitampim-bava…
Mahereza daholo fa tapitra ny ahy ny tafatafako anio. Ratalata Jn Bà sakaizanao…
Fanampiny nampidirina ny 4/10/2017
Io tsy hoe lalao an-kianja,
ka na hita fa tsy mety,
dia hikiry indray rafanja,
hampandry adrisa, hametsifetsy:
fa hanova tetik'ady,
hifehezana ny olana,
hilaza ny mahavita azy,
hiarovan-tseza tsy hiongana!
Pesta efa mby an-koditra,
"mitonia fa voafehy e!
Tsy misy tokony hampangovitra"
Hoy ianareo mirehareha!
Sao tsy rariny rafanja a,
mibaboka no fahendrena!
Ity tsy kilalaon-jaza,
fa ain-dehiben'ny firenena!
Hoe efa efapolo no matin'ny pesta amin'izao
Fa tsy nogadrainareo, 'lay olona nilaza
Ary azonao jerena amin'ny anterinety.
Fa voafehy hono ny pesta, milamin-tsaina izaho sy ianao
'Zao ny gasy mihirohoro, miha-betsaka no dangy
Ny fahasalaman'ny vahoaka, ataonareo sangisangy.
Eto amintsika, be dia be, ireo ambonin'ny lalàna
Raha tia anay 'nareo ka tsy manavakavaka
Satria samy gasy, hoe namana sy havana
Tsy "kaotrima" no ilaina na irony tampim-bava
Fa ny olam-piainanay : 'zahay 'lay noana lava.
'Zay pesta anareo any, tsy misy iasanay saina
Ny "DDT" sy "nuvan", ento any fa tsy ilaina
Fa 'zahay efa ela no nifandray tànana :
Ny voalavo sy parasy no tapaka sy namana.
Dia aza ailikilika amin'ny voalavo sy totozy
Ny tsy fahombiazanareo, mpitondra ao ambony
Any an-kafa ny mafotaka : ady amin'ny terorista
Ny anareo hatram'zao, mbola ady amin'ny pesta.
Ny ilainay ety 'zao dia sakafo sy fitafy
Tsy problemanay mihitsy 'zay voalavo sy parasy
Koa raha tsisy politikan'ady amin'ny fahantrana
Dia 'zay hohaninay anio aloha omena ry fanjakana.
Ny ady atrehinareo, mety ho foana sy hiserana
Fa ny fahantranay mandava-taona, lalim-paka, mari-toerana.